အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ: NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - - စာမျက်နှာ 50 2019 NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ။ Show ကို 2019 NAB ။
မီဒီယာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့်ကီဗင်ဖြစ်သူ Scott Signiant ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Signiant Inc မှ, အသိဉာဏ်ဖိုင်လွှဲပြောင်း၌ရှည်လျားသောအချိန်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်, ထွန်းသစ်စစျေးကွက်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ cloud-ဇာတိ SaaS ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်၏ကုမ္ပဏီရဲ့မဟာဗျူဟာကိုထောကျပံ့ဖို့အသစ်တစ်ခုကို C-Level အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍဖန်တီးထားသည်။ မီဒီယာအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်စံချိန်တင်သည့်နှစ်ချွတ် Capping, Signiant key ကိုမိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာရှိချုပ်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်ကီဗင်ဖြစ်သူ Scott ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ မီဒီယာဖြစ်သူ Scott ရဲ့ရှည်လျားပြီးအောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း DIRECTV နှင့် Deluxe မှာခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍထည့်သွင်းထားသည်။ သူကအများဆုံးမကြာသေးမီကနည်းပညာအပေါ်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း M & E ကုမ္ပဏီအများအပြားဖို့အကြံပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ...
အသံလွှင့် Pix BPswitch ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုအတူ Loyola University ကချီကာဂိုအပ်ဒိတ်များ Convergence စတူဒီယို
Chelmsford, Mass - ။ ဒီဇင်ဘာ 6, 2018 - အသံလွှင့် Pix ယနေ့ Loyola University မှာဆက်သွယ်ရေး၏ကျောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ချီကာဂိုအသစ်တစ်ခုထုတ်လွှင့် Pix BPswitch MX ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုခလုတ်နှင့်အတူ၎င်း၏ Convergence စတူဒီယိုအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ 2009 အတွက်မြို့တွင်းချီကာဂို built-in, စက်ရုံဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်များအသုံးပြုသောနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့် Workflows မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဒီဇိုင်းရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒေသများရတာဟာ။ Jamason ချန်, နည်းပညာ၏မန်နေဂျာယခင်အသံလွှင့် Pix Mica ™ system ထဲကနေနည်းပညာအဆင့်မြှင့်, မေလအတွက်အသစ်အ BPswitch installed ။ သူကလက်ရှိ control panel ကိုနှင့် cabling သုံးစွဲဖို့နိုင်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ...
လူငယ်ကဏ္ဍအဘို့အ HDR ကူးပြောင်းခြင်း Solutions သရုပ်ပြမှဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်: SVG ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။ ဒီဇင်ဘာ 6, 2018 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်နယူးယောက်ဟီလ်တန် Midtown မှာဒီဇင်ဘာလ 2018-10 ပြေးသော 11 SVG ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်အခြားထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာ၎င်း၏အဆင့်မြင့် dynamic range ကို (HDR) ပြောင်းလဲခြင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ။ Technicolor® HDR Intelligent Tone ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (ITM) နည်းပညာနှင့်အတူopenGear®ပလက်ဖောင်းများအတွက်ဘော့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 9904-UDX-4K တက် / ဆင်း / လက်ဝါးကပ်တိုင် converter နှင့်ပုံရိပ်ကို Processor ကိုအသုံးပြုခြင်း, ထုတ်လွှင့် HD နှင့် HDR ကိုဖြန့်ဖြူးဘို့ 4K စံ dynamic range ကို (SDR) content တွေကိုငွေရရှိအောင်နိုင်ပါတယ် အဖြစ်တစ်ခု SDR feed ကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန် HDR အတွေ့အကြုံကိုပေး။ HD နဲ့ 4K တိုက်ရိုက်အားကစားအဘို့, 9904-UDX-4K ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားအော်ပရေတာချောမွေ့စွာခွင့်ပြု ...
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များဥရောပ, ဣသရေလအမျိုးနှင့်တောင်အာဖရိကဘို့အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Giles ခန့်အပ်
Weybridge, ဗြိတိန်, ဒီဇင်ဘာ 6th 2018 -Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ, တစ်ဦးဦးဆောင်အလိုအလျောက်, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းအထူးကု, ယနေ့ဥရောပ, ဣသရေလအမျိုးနှင့်တောင်အာဖရိကများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏အသစ်ကအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Giles ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ အားကြီးသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိစက်မှုလုပ်ငန်း, အန်ဒီယခင်က Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ, Snell & Wilcox Ltd နှင့် Amberfin (Dalet ၏ယခုအစိတ်အပိုင်း) မှာအကြီးတန်းရာထူးကျင်းပခဲ့တယ်။ Tamas Vass, Pebble မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်း၏အကြီးတန်း VP "အန်ဒီရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, စီးပွားဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဖောက်သည်အာရုံစိုက်သူ့ကိုစုံလင်ဒီအခန်းကဏ္ဍအတွက်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပေါ်တွင်အဆုံးအသုံးပြုသူတွေနဲ့တိုင်ပင်သူ၏အတွေ့အကြုံကိုအောင် commented ...
EditShare လီဗာပူးလ်မျက်နှာပြင် School မှာအမြင့် Marks လာ
လီဗာပူးလ် John Moore တက္ကသိုလ်က၎င်း၏မီဒီယာအခြေခံအဆောက်အအုံချဲ့ထွင်; ဒီဇင်ဘာလ 6, 2018 - - EditShare အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, ယနေ့အဆိုပါကြေညာခဲ့သည်အသစ်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာဗြိတိန်, EditShare XStream EFS နဲ Shared သိုလှောင်, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, Remote access ပြုလုပ်ရန် Airflow နှင့် QScan automated အရည်အသွေးကိုအာမခံချက် Basingstoke features လီဗာပူးလ်မျက်နှာပြင်ကျောင်း, Remote access ပြုလုပ်ရန် Airflow အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် EditShare XStream EFS နဲသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းမှတည်ဆဲမီဒီယာအခြေခံအဆောက်အအုံအဖြစ်ကဆက်ပြောသည် EditShare Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) သို့အဆင့်မြှင့်, နှင့်၎င်း၏သတင်းစာပညာကိုထောကျပံ့ဖို့ QScan automated အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်, မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရုပ်ရှင်လေ့လာရေးထားပါတယ် အစီအစဉ်များ။ သူတို့၏ "သီအိုရီအဘို့အမှတ်ချက်ပြုခြင်းနှင့် ...
36th အမေရိကဖလား: ကမ္ဘာ့အများစုမှာအံ့မခန်းရွက်လှေဇာတ်စင်မှစက်ဝိုင်းအို
ဗီယင်နာ - ဒီဇင်ဘာ 6, 2018 - 2021 ခုနှစ်, 36th အမေရိကဖလားအော့ကလန်, နယူးဇီလန်ဆီသို့ရွက်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ဝိုင်း-o အသံလွှင့် Productions အဖြစ်အတူတူအလုပ်လုပ်, သြစတြီးယားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ West4Media နှင့်ဂျာမန်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သူ Riedel ဆက်သွယ်ရေးတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီအဓိကတီဗီဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကားရဲ့ဖလား, အသက်အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားဖလားအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, စိတျလှုပျရှားစရာလူမျိုးတစ်ဦးစီးရီးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးရွက်လှေကလပ်တွင်း။ အဆိုပါ 36th အမေရိကဖလားမှာနယူးဇီလန်ကနေခေါင်းစဉ်နောက်ခံလူစိန်ခေါ်ဖို့လက်ျာအနိုင်ရစေရန်, တဦးတည်းအသင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်း Prada ဖလားခြေစစ်ပွဲလူမျိုးမှာထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာကြရမယ် ...
SMPTE ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှု Options ကိုတစ်ဦးက New HDR နည်းပညာနှင့် Workflows သင်တန်းနှင့်အတူ Virtual စာသင်ခန်းတိုးချဲ့
White Plains, နယူးယော့ - ဒီဇင်ဘာ 6, 2018 - SMPTE®, အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံခဲ့ပြီးသူ၏အဖွဲ့ဝင်ကမ္ဘာလုံးအထိချဲ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ခုသင်တန်းနှင့်အတူ SMPTE ရဲ့ Virtual စာသင်ခန်းပူဇော်သက္ကာကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်: High-Dynamic -Range မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများအတွက် (HDR) နည်းပညာနှင့် Workflows ။ နည်းပြဆရာ Pierre ၏ Routhier တစ်ခုအဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ဖော်အထူးကုကဦးဆောင်ပြီး, ဒီသင်တန်းထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ကြည့်ရှုဖို့ကျွမ်းကျင် မှစ. , HDR လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီးအရေးပါသဘောတရားများနှင့်လက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ "SMPTE ရဲ့ Virtual စာသင်ခန်းသင်တန်းများသင်တန်းဟာယပူဇော်သက္ကာကဲ့သို့, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာကိုအတူပါဝင်ပတ်သက်နည်းပညာသမား, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ယောဂီများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောသယံဇာတများမှာ ...
universal အီလက်ထရောနစ်ဆုရထုတ်ကုန်နှင့်နည်းပညာ Pay-TV ကိုလုပ်ငန်းရှင်များများအတွက်ဥရောပတစ်ဝှမ်း Entertainment က Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေး၏မွေးစားခြင်းမောင်းဖို့ Continue
Enschede, အဆိုပါနယ်သာလန် - 06 ဒီဇင်ဘာလ 2018 - အတိတ်ကာလခြောက်လအတွင်းဥရောပတစ်လွှားဦးဆောင် Pay-TV ကိုအော်ပရေတာနှင့်အတူခြောက်လအသစ်သောစကားသံကိုထိန်းချုပ်ထားသောဝေးလံခေါင်သီ၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Universal အီလက်ထရောနစ် Inc ကို (NASDAQ: UEIC) (UEI), ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေါင်းဆောင်အတွက် တစ်လောကလုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့် sensing နည်းပညာသစ်, စားသုံးသူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကသူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်လမ်းကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်သောထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းပို့ဆောင်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်လမ်းပြနေဆဲဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အချက်အလက်များအရယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီပရိသတ်ကိုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနေတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင် 4.4 နာရီပျမ်းမျှအား TV ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့လျှင်နီးပါး 28 မိနစ်သုံးစွဲသည်။ 2015 အတွက်မိတ်ဆက် Voice ကိုအညွှန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, တစ်ဦးဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ ...
Telia စတိုးနီးယားရှိ၎င်း၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ OTT ယဇ်အာဏာ ATEME ရွေးချယ်
ပဲရစ်, Denver, စင်္ကာပူ, Sao Paulo 06 ဒီဇင်ဘာ, 2018 - ATEME, ထုတ်လွှင့်အတွက်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်အတွက်ထွန်းသစ်စခေါင်းဆောင်, cable DTH, IPTV နှင့် OTT, Telia စတိုးနီးယား, ဘောလ်တစ်အတွက် operating အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းကယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ယင်း၏နောက်မျိုးဆက် OTT ဖြေရာယဇ်ချုံ့နှင့် package မှ ATEME ရဲ့ Titan ဖြေရှင်းချက်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားစတိုးနီးယားတလျှောက်လုံး, HD န်ဆောင်မှုများလက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားနှင့်အသစ်ထုပ်ပိုးကို formats မိတ်ဆက်။ titan, ATEME ရဲ့ပြီးပြည့်စုံဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ OTT ဖြေရာယဇ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ Telia စတိုးနီးယားနိုင်ပါတယ်: ပရီမီယံဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံ: ATEME ရဲ့ Streaming © algorithms မှာ content တွေကိုသစ္စာကိုထိန်းသိမ်းရန် ...
ဥရောပ IPTV ပံ့ပိုးပေး Edgeware ရဲ့ကြော်ငြာသွင်းဖြေရှင်းချက်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
Edgeware က Edgeware ရဲ့ကြော်ငြာ INSERT ပူဇော်သက္ကာကိုအသစ်သောဝင်ငွေစီးဖို့လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအလေးပေးသည်၎င်း၏အဓိကဥရောပဖောက်သည်တဦးထံမှသိသိသာသာအမိန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ယနေ့ကြေငြာလိုက်သည်။ Edgeware က၎င်း၏အဓိကဥရောပ IPTV ဖောက်သည်တဦးထံမှသိသိသာသာအမိန့်အနိုင်ရသည်ဟုကြေညာဖို့မင်္ဂလာရှိ၏။ လက်ရှိဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း Edgeware ရဲ့ကြော်ငြာသွင်းဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ဒိုင်းနမစ်ကြော်ငြာအပြောင်းအလဲများအောင်အသစ်လိုအပ်ချက်များကိုမောင်းနှင်နေသည်။ ဒီအရာပူဇော်သက္ကာသည် dynamically ၏ပလေးအောက်ကိုအသစ်ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းဖို့ဖောက်သည််, IPTV ကြော်ငြာတစ်ခုချုပ်ထုတ်ကုန်များပါရှိသည် ...
အဆိုပါ 2019 ဖီဖာအမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား၏ input မီဒီယာအနိုင်ရရှိဘီဘီစီ Coverage
ဘီဘီစီလွတ်လပ်သော Input အားမီဒီယာပြင်သစ်တွင်ကျင်းပမည့်ယခုနှစ်နွေရာသီရဲ့ဖီဖာအမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား၏လွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ရန်လန်ဒန်အခြေစိုက်အားကစားခနျ့အပျခဲ့သညျ။ input မီဒီယာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘီဘီစီရဲ့ကွန်ယက်ကိုတီဗီလိုင်းများပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် programming ကိုဘီဘီစီ iPlayer နှင့်ဘီဘီစီအားကစား website ကိုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲ 07 ဇွန်လထံမှ 07 ဇူလိုင်လ 2019 ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးလုံခြုံအဆိုပါစာချုပ်, ဘီဘီစီနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ဆက်ဆံရေးတစ်ခု extension ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ input မီဒီယာ 2015 အတွက်ကနေဒါမှဤပြိုင်ပွဲများ၏လွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိ FA ဖလားရည်မှန်းချက်များဘီဘီစီဘို့ချိန်းထုတ်လုပ်သည်။ input Programs ကို၏မီဒီယာရဲ့ဦးခေါင်း ...
အဆိုပါ 2018 အမေရိကန်ပွင့်လင်းမှာ Bannister ရေကန်ဆော့ဝဲတစ်ခုတပ်များ
CAMBRIDGE, အွန် - ဒီဇင်ဘာ 5, 2018 - Bannister ရေကန်ဖလပ် Meadows, နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ usta Billy ဂျင်းဘုရင်ကအမျိုးသားတင်းနစ်စင်တာ (NTC) မှာဒီနှစ်အမေရိကန်ပွင့်လင်းမှာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ Bannister ရေကန်ရဲ့အစွမ်းထက်ဒေတာအင်ဂျင်, Chameleon မျိုးစုံဒေတာများအတွက် Real-time data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစုံထဲကနေကျွေးမွေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ပုတ်သင်ညို, filter ကို reformat အလယ်အလတ်နှင့် NTC တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသော-shaped ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များများစွာမှဒေတာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖြန့်ဝေဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Bannister ရေကန်ထက်ပို၏ပါဝင်မှုကိုမှသက်ဆိုင်ရာ 250,000 XML ဖိုင်များကိုကျော်ကိုင်တွယ်သော workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကြံစည်အတွက်ဆာခဲ့ ...
EditShare Flow 2019 ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးအပေါ်မျက်မှောက်သတ်မှတ်ရန်
ဒီဇင်ဘာလ 3,5- - EditShare, အသိဉာဏ်စကေးထွက်သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင် AQC နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, ယနေ့အမေဇုံ S2018 & Glacier, Backblaze နှင့် Microsoft Azure Basingstoke, ဗြိတိန်မှဖန်တီးမှုများနှင့်အဆောက်အဦချိတ်ဆက်ပြီးလုံခြုံ cloud-based မီဒီယာပူးပေါင်းတိုးချဲ့ Flow 2019, မီဒီယာဝယ်ယူ, စုဝေးနှင့်စက်ရုံ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပေးပို့စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှု tools များနှင့်အတူမီဒီယာခွဲဝေမှုများနှင့်ပူးပေါင်းရိုးရှင်းစွာသောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ စီးဆင်းမှုလက်ရှိထိုကဲ့သို့ Avid ISIS အဖွဲ့ / NEXIS အဖြစ်မဆို SMB shared သိုလှောင်မှုအဖြစ်ရဝုဏ်သိုလှောငျရောင်းချသူအပေါ်ထောက်ခံပါတယ်။ flow ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအမေဇုံ S3, Generic S3 အဖြစ်ဦးဆောင် archive ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဆက်သွယ် ...
ရှေ့ကို ACC ကွန်ယက် Launch ၏ Louisville က selection မြက်ချိုင့်ဖွင့် Enhanced Signal ဂီယာဖြေရှင်းချက်တက္ကသိုလ်
Montreal - 8: 00 EST ဒီဇင်ဘာလ 5, 2018 - Louisville ကတက္ကသိုလ်က၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုအဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ထို Viper မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ်ကနေ XL Bidirectional fiber optic ဂီယာစနစ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ဆက်သြဂုတ်လ 2019 အတွက်အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေညီလာခံ (ACC) ကွန်ယက်ရဲ့ linear နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ်လွှတ်၏လာသည်။ channel ကိုများအတွက်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သည့်အခါ ACC ကွန်ယက်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ, တက္ကသိုလ်ယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂိမ်းအကြားအစာရှောင်ခြင်း Set-up အတူမျိုးစုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်မရာအချက်ပြမှုများကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ ESPN ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကောလိပ်အားကစားကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရည်ရွယ်သကဲ့သို့, ACC ကောလိပ်များအားလုံးအပါအဝင်, ကွန်ယက်ရဲ့ပစ်လွှတ်မှုအတွက်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည် ...
စတူဒီယို Technologies က Introduces နယူးDante®-ကိုက်ညီအသံ Interfaces
SKOKIE, IL, ဒီဇင်ဘာ 5, 2018 - စတူဒီယို Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ၏ထုတ်လုပ်သူ, ဗီဒီယိုများနှင့် fiber-optic ဖြေရှင်းနည်းများ, ထိုမော်ဒယ် 5412 ပေး Audio Interface နှင့်မော်ဒယ် 5418 မိုက်ကရိုဖုန်း / line interface, အသံအသုံးပြု application များအတွက်သစ်နှစ်မျိုးကို Dante-compliant ဖြေရှင်းနည်းများကိုမိတ်ဆက် -over-Ethernet (AoE) သည်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု။ နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိစွာ installation နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးကိုထောက်ပံ့သောထူးခြားသော features တွေနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံစွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ "Dante အသံ-over-Ethernet ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားဖြင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအရည်အသွေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းကြောင့်အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏လွယ်ကူခြင်းမှအသံ '' ကျောရိုး '' အဖြစ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်," ဂေါ်ဒွန် Kapes, စတူဒီယို Technologies ကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ "တုန့်ပြန်မှာတော့ကျနော်တို့ကဤသစ်ကိုဖန်တီး ...
Sigma 14-24mm F2.8 အနုပညာနှင့် 70mm F2.8 Macro အနုပညာပိုမိုဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအာရုံစိုက်ဒီအားလပ်ရက်ရာသီသို့ကွှလာ
Ronkonkoma, နယူးယော့ - ဒီဇင်ဘာလ 4, 2018 - အမေရိက၏ Sigma ကော်ပိုရေးရှင်း, တစ်ဦးဦးဆောင်နေဆဲဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှန်ဘီလူး, ကင်မရာ, flash ပါနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အနုပညာမျက်ကပ်မှန်ကိုကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည် - ultra-wide-angle ရှုခင်း stunner 14-24mm F2.8 နှင့်မက္ကရိုမာစတာ 70mm F2.8 - ဤကျဆုံးခြင်းလေးဂုဏ်သိက္ခာဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 2018 ဓာတ်ပုံ Plus အားကုန်စည်ပြပွဲယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Wide Angle မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးနှင့် Sigma 14mm F24 DG Macro အနုပညာယခုနှစ်အကောင်းဆုံးအထူးရည်ရွယ်ချက်မှန်ဘီလူးဟာ Sigma 2.8-70mm F2.8 DG HSM အနုပညာအမည်ရှိ Lucie နည်းပညာဆိုင်ရာဆုပေးပွဲမှာ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမျက်ကပ်မှန်ထည့်သွင်း ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် Nevion virtuoso ရွေး
အော်စလို, နော်ဝေး,5ဒီဇင်ဘာလ 2018 - Nevion, virtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဆုရပံ့ပိုးပေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းက၎င်း၏ virtuoso software ကို-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ node ကိုပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်တော်မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါအော်စကာဆုရှင် Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအိမ်သူအိမ်သားကိုအဓိကဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုများအတွက်ဖြန့်ဝေသည်အထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်အရောင်-ဆုံးမခြင်းအလုပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ virtuoso အသုံးပြုနေသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းရဲ့ကျော်ကြားမှုတိုက်တန်းနစ်ပေါ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအတွက်ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်နှင့်အတူ၎င်း၏ပူးပေါင်းပြန်လည်ပိုပြီး 25 နှစ်ပေါင်းထက်တတ်၏။ Homecoming, ဒစ္စနေးရဲ့အလှအပနှင့်သားရဲများနှင့် Avengers: Infinity စစ်ပွဲ ထိုအချိန်မှစ. သူကပင့်ကူလူသားအပါအဝင်များစွာသောအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလအဘို့အ ...
Facilis နှင့် BrandStar အဖွဲ့ Up ကို 4K + ထုတ်လုပ်မှု Enable လုပ်ဖို့
Hudson, MA (ဒီဇင်ဘာလ 5th, 2018) - Facilis, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမကြာသေးမီက BrandStar, full-service ကိုအမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်တော်ကို install လုပ်ထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် တစ်ဦး Facilis Shared သိုလှောင်ကွန်ယက် 4K + ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် post ကိုထုတ်လုပ်မှု Workflows ကိုထောကျပံ့ဖို့။ Pompano သဲသောင်ပြင်, ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်, BrandStar performance-, မူရင်းဘလော့ဂ်များနှင့်လူမှုရေးစာပို့ခြင်းကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ကို Activation ဖို့, သူတို့ကဆုရတီဗီရှိုးများနှင့်တိုင်းမျက်နှာပြင်အနှံ့ပရိသတ်တွေနှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ဘယ်မှာ State-Of-The-Art စတူဒီယိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် based စျေးကွက်နှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှု။ ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုဌာနကို update ပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါရှာကြံ ...
50 ၏စာမျက်နှာ 911«ပထမဦးစွာ...203040«4849505152»607080...နောက်ဆုံး»